‘५ वर्षमा गर्ने काम मैले डेढ वर्षमा गरिसकें’-मेयर विद्यासुन्दर शाक्य
काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफू मेयरमा निर्वाचित भएपछि डेढ वर्षको अवधिमा धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, “म मेयर भएको अहिले १७ महिना पूरा भएर १८ महिना लाग्यो । यो अवधिमा हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । हिजोभन्दा आज धेरै काम भएका छन् । यथार्थ धरातलमा रहेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।”
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मेयर शाक्यले सडकको पुनर्निर्माण भइसकेको पनि जनाए । उनले भने, “यो आर्थिक वर्षलाई हामीले पूर्वाधार वर्ष घोषणा गरेर अघि बढेका छौं । महानगरले जिम्मा पाएको सहायक सडकहरू बनाउने काम लगभग पूरा भएको छ । सडक बनाउने कामको लागि अब ५ वर्ष पर्खिनुपर्दैन ।” उनले आफू आएपछि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे ।
उनले पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा सम्पदा पुनर्निर्माणको २/४ वटा काम बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने, “धरहराको काम सुरु भइसकेको छ । दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण सुरु भइसक्यो । रानीपोखरी र काष्ठमण्डप मन्दिरको पनि काम सुरु हुन्छ । काठमाडौं महानगरको भवन निर्माणको पनि काम छिट्टै सुरु हुन्छ । विवादका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो ।”
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको काम र सडक विस्तारको कामले गर्दा काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएको उनले गुनासो सुनाए । उनले भने, ‘जोरपाटीमा फोहोर थुप्रियो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, सितापाइलाको सडक हिलाम्य भयो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, सानेपाका सडक धुलाम्य भयो भने पनि काठमाडौंको मेयरलाई गाली गरिन्छ, त्यहाँ पनि नगरपालिकाहरू छन् नि । सडक विस्तारको कामले काठमाडौं धुलोमैलो भएको छ । हामीले काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाउँछौं भनेका थियौं । मेलम्चीले आफ्नो काम तत्काल सम्पन्न नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं महानगरलाई परिरहेको छ ।”
उनले काठमाडौंका सम्पदा पुनर्निर्माणमा महानगरले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि सुनाए । उनले भने, “काष्ठमण्डप, धरहरा र रानीपोखरीको निर्माण काम छिटो सुरु हुन्छ । यी सम्पदा छिटो बनिदियोस् भनेर आवाज उठिरहेको छ ।” प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि काठमाडौं महानगरले गरिरहेको बताउँदै उनले यसको लागि सरकारले आफूहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “फोहोर मैलाको सवालमा अर्को वर्षासम्म काठमाडौं हिलो नहुने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । सुरुका केही दिन र केही समय धेरै अन्यौल भयो ।”
काठमाडौंका विभिन्न सडकमा फोहोर थुप्रिँदा यसबारेमा काठमाडौंको मेयर र महानगरपालिकालाई भन्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जोसँग आश छ, जसलाई विश्वास गरिन्छ, उसैले भन्ने हो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मात्रै होइन, प्रदेश र संघीय सरकारको पनि काम गरिरहेको छ । उहाँहरूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेका छौं । अहिले सिसडोलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै होइन, काठमाडौं जिल्लाको १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर जान्छ । काभ्रेको फोहोर त्यहाँ जान्छ । धादिङको फोहोर त्यहाँ जान्छ । के सबैको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको हो र ? होइन नि । तर, नहुँदा नहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो र धार्मिक सोच भएको सहर, राजनीतिक सहर भएको नाताले प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौं ।”
काठमाडौं महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न छोडिदिने हो भने सिँगो काठमाडौं उपत्यका दुर्गन्धित हुने उनको भनाइ छ । उनले थपे, “उपत्यकामात्रै होइन, काभ्रे, नुवाकोट र धादिङ पनि दुर्गन्धित हुन्छ । हामी त्यस्तो भएको हेर्न चाहँदैनौं । हामी गाली खाएर पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न चाहन्छौं । लामो समयपछि हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरम गठन गरेका छौं । अब उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सडक व्यवस्थापन र उपत्यकाका साझा नदीहरूको व्यवस्थापनलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले फोरम बनाइसकेका छौं ।”
सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग लामो छलफलपछि बञ्चरे डाँडो कसले बनाउने ? सेन्ट्रल ल्याण्डफिल्ड कसले बनाउने ? भन्नेबारे टुँगो लागिसकेको पनि उनले जनाए । उनले भने, “त्यसका लागि हामीले तीनवटा निर्णय गरेका छौं । पहिलो निर्णय भनेको बञ्चरे डाँडो नै अन्तिम गन्तव्य हो । सिसडोलमा अहिले हामी फोहोर फाल्न सक्दैनौं । बढिमा तीन महिनापछि अब त्यो फोहोर बञ्चरे डाँडोमा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने बाटो, पूर्वाधार नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । अहिले धमाधम डीपीआरको काम भइरहेको छ ।”